झन्डै ४ अर्ब खर्चमा यस्तो बन्दैछ २२ तलाको धरहरा ( नक्सा/ भिडियोसहित) | Saajha Khabar
झन्डै ४ अर्ब खर्चमा यस्तो बन्दैछ २२ तलाको धरहरा ( नक्सा/ भिडियोसहित)
Posted by Saajha Khabar On May 31, 20180Comment
२०७२ सालको भूकम्पले पु-याएको क्षतिमध्ये हामीले भुल्न नसक्ने एउटा सम्पदाको नाम हो धरहरा । काठमाडौंको ल्यान्ड मार्कका रूपमा रहेको धरहरा भत्किएको ३ वर्ष पूरा हुँदा पनि यसको पुनर्निर्माण गर्न कुनै सुरसार भएन । कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने, कति लगानी गर्ने, कसले लगानी गर्ने ? भन्ने जस्ता प्रश्नको जालोमा अल्झिएको धरहरा पुनर्निर्माणको काम अब भने अगाडि बढ्न खोजेको छ ।
प्राधिकरणका सहसचिव मानन्धरले भने– ‘पहिलेको धरहरा ९ तले भए पनि तलाको उचाइ निकै अग्लो थियो । तर अब बन्ने धरहराको तलाको उचाइ पहिलेको भन्दा कम हुनेछ । २२ तलाको भए पनि पहिलाको धरहराभन्दा केही बढी मात्र उचाइ हुनेछ ।’
बोलपत्रमार्फत ठेकेदार कम्पनी छनौट गरेपछि २ वर्षभित्र धरहरा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको पालामा झन्डै साढे २ सय वर्षअघि निर्मित धरहरा भूकम्पका कारण दुई पटक भत्कियो । वि.सं. १९९० मा भत्किएको धरहरा पुनर्निर्माण गरिएको थियो तर २०७२ सालको भूम्पकले त्यसलाई पूर्ण रूपमा क्षति पु¥यायो । अहिले धरहराको खण्डहर फेद मात्र बाँकी छ ।
हेर्नुहोस् भिडियोमा नयाँ धरहराको नक्सा :
Previous: छोरीसँगको यो फोटो पोष्ट गरेपछि अत्यधिक ट्रोल भइरहेछन् आमिर खान
Next: १८ हजार नागरिकता जलाइयो